LEGAL CITIZENSHIP BY INVESTMENT for Bulgaria | 100% SUCCESS RATE | AFFORDABLE | Apply for CITIZENSHIP BY INVESTMENT of Bulgaria, citizenship by investment Bulgaria, citizenship by investment programs Bulgaria, citizenship by investment program Bulgaria, second citizenship by investment Bulgaria, dual citizenship by investment Bulgaria, residence and citizenship by investment Bulgaria, residency and citizenship by investment Bulgaria, economic citizenship programs Bulgaria, citizenship by investment scheme Bulgaria, citizenship by investment schemes Bulgaria, get citizenship by investment Bulgaria, get citizenship by investment programs Bulgaria, get citizenship by investment program Bulgaria, get second citizenship by investment Bulgaria, get dual citizenship by investment Bulgaria, get residence and citizenship by investment Bulgaria, get residency and citizenship by investment Bulgaria, get economic citizenship programs Bulgaria, get citizenship by investment scheme Bulgaria, get citizenship by investment schemes Bulgaria, apply for citizenship by investment Bulgaria, apply for citizenship by investment programs Bulgaria, apply for citizenship by investment program Bulgaria, apply for second citizenship by investment Bulgaria, apply for dual citizenship by investment Bulgaria, apply for residence and citizenship by investment Bulgaria, apply for residency and citizenship by investment Bulgaria, apply for economic citizenship programs Bulgaria, apply for citizenship by investment scheme Bulgaria, apply for citizenship by investment schemes Bulgaria, citizenship by investment agents Bulgaria, citizenship by investment programs agents Bulgaria, citizenship by investment program agents Bulgaria, second citizenship by investment agents Bulgaria, residence and citizenship by investment agents Bulgaria, economic citizenship programs agents Bulgaria, citizenship by investment scheme agents Bulgaria, citizenship by investment schemes agents Bulgaria, citizenship by investment agent Bulgaria, citizenship by investment programs agent Bulgaria, citizenship by investment program agent Bulgaria, second citizenship by investment agent Bulgaria, residence and citizenship by investment agent Bulgaria, economic citizenship programs agent Bulgaria, citizenship by investment scheme agent Bulgaria, citizenship by investment schemes agent Bulgaria, citizenship by investment lawyers Bulgaria, citizenship by investment programs lawyers Bulgaria, citizenship by investment program lawyers Bulgaria, second citizenship by investment lawyers Bulgaria, residence and citizenship by investment lawyers Bulgaria, economic citizenship programs lawyers Bulgaria, citizenship by investment scheme lawyers Bulgaria, citizenship by investment schemes lawyers Bulgaria, citizenship by investment lawyer Bulgaria, citizenship by investment programs lawyer Bulgaria, citizenship by investment program lawyer Bulgaria, second citizenship by investment lawyer Bulgaria, residence and citizenship by investment lawyer Bulgaria, economic citizenship programs lawyer Bulgaria, citizenship by investment scheme lawyer Bulgaria, citizenship by investment schemes lawyer Bulgaria, citizenship by investment attorneys Bulgaria, citizenship by investment programs attorneys Bulgaria, citizenship by investment program attorneys Bulgaria, second citizenship by investment attorneys Bulgaria, residence and citizenship by investment attorneys Bulgaria, economic citizenship programs attorneys Bulgaria, citizenship by investment scheme attorneys Bulgaria, citizenship by investment schemes attorneys Bulgaria, citizenship by investment consultants Bulgaria, citizenship by investment programs consultants Bulgaria, citizenship by investment program consultants Bulgaria, second citizenship by investment consultants Bulgaria, residence and citizenship by investment consultants Bulgaria, economic citizenship programs consultants Bulgaria, citizenship by investment scheme consultants Bulgaria, citizenship by investment schemes consultants Bulgaria, citizenship by investment fees Bulgaria, citizenship by investment programs fees Bulgaria, citizenship by investment program fees Bulgaria, second citizenship by investment fees Bulgaria, dual citizenship by investment fees Bulgaria, residence and citizenship by investment fees Bulgaria, residency and citizenship by investment fees Bulgaria, economic citizenship programs fees Bulgaria, citizenship by investment scheme fees Bulgaria, citizenship by investment schemes fees Bulgaria, best citizenship by investment Bulgaria, best citizenship by investment programs Bulgaria, best citizenship by investment program Bulgaria, best second citizenship by investment Bulgaria, best dual citizenship by investment Bulgaria, best residence and citizenship by investment Bulgaria, best residency and citizenship by investment Bulgaria, best economic citizenship programs Bulgaria, best citizenship by investment scheme Bulgaria, best citizenship by investment schemes Bulgaria, best citizenship by investment agents in Bulgaria, best citizenship by investment programs agents in Bulgaria, best citizenship by investment program agents in Bulgaria, best second citizenship by investment agents in Bulgaria, best residence and citizenship by investment agents in Bulgaria, best economic citizenship programs agents in Bulgaria, best citizenship by investment scheme agents in Bulgaria, best citizenship by investment schemes agents in Bulgaria, best citizenship by investment lawyers in Bulgaria, best citizenship by investment programs lawyers in Bulgaria, best citizenship by investment program lawyers in Bulgaria, best second citizenship by investment lawyers in Bulgaria, best residence and citizenship by investment lawyers in Bulgaria, best economic citizenship programs lawyers in Bulgaria, best citizenship by investment scheme lawyers in Bulgaria, best citizenship by investment schemes lawyers in Bulgaria, best citizenship by investment attorneys in Bulgaria, best citizenship by investment programs attorneys in Bulgaria, best citizenship by investment program attorneys in Bulgaria, best second citizenship by investment attorneys in Bulgaria, best residence and citizenship by investment attorneys in Bulgaria, best economic citizenship programs attorneys in Bulgaria, best citizenship by investment scheme attorneys in Bulgaria, best citizenship by investment schemes attorneys in Bulgaria, best citizenship by investment consultants in Bulgaria, best citizenship by investment programs consultants in Bulgaria, best citizenship by investment program consultants in Bulgaria, best second citizenship by investment consultants in Bulgaria, best residence and citizenship by investment consultants in Bulgaria, best economic citizenship programs consultants in Bulgaria, best citizenship by investment scheme consultants in Bulgaria, best citizenship by investment schemes consultants in Bulgaria, best citizenship by investment law firms in Bulgaria, best citizenship by investment programs law firms in Bulgaria, best citizenship by investment program law firms in Bulgaria, best second citizenship by investment law firms in Bulgaria, best residence and citizenship by investment law firms in Bulgaria, best economic citizenship programs law firms in Bulgaria, best citizenship by investment scheme law firms in Bulgaria, best citizenship by investment schemes law firms in Bulgaria, best citizenship by investment services in Bulgaria, best citizenship by investment programs services in Bulgaria, best citizenship by investment program services in Bulgaria, best second citizenship by investment services in Bulgaria, best residence and citizenship by investment services in Bulgaria, best economic citizenship programs services in Bulgaria, best citizenship by investment scheme services in Bulgaria, best citizenship by investment schemes services in Bulgaria, best citizenship by investment solicitors in Bulgaria, best citizenship by investment programs solicitors in Bulgaria, best citizenship by investment program solicitors in Bulgaria, best second citizenship by investment solicitors in Bulgaria, best residence and citizenship by investment solicitors in Bulgaria, best economic citizenship programs solicitors in Bulgaria, best citizenship by investment scheme solicitors in Bulgaria, best citizenship by investment schemes solicitors in Bulgaria, citizenship by investment in property Bulgaria, citizenship by investment in real estate Bulgaria, real estate citizenship program Bulgaria, real estate citizenship programs Bulgaria, invest in real estate in Bulgaria to get residency in Bulgaria
Ubumi ngoTyalo mali lweBulgaria kunye neGolden Visa
● Ubummi ngotyalo-mali lweBulgaria ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Iiarhente zobumi ngoTyalo mali eBulgaria Kunye namagqwetha ee Ubummi ngoTyalo mali eBulgaria kunye nabarhwebi bepropathi yokuthengisa izindlu nomhlaba kwiinkqubo zaseBulgaria zisebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ubummi ngeearhente zotyalo mali zeBulgaria zibonelela ngeendawo zokuhlala ngotyalo-mali eBulgaria, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eBulgaria, Ubummi ngenkqubo yotyalo-mali eBulgaria, Ubummi besibini ngotyalo-mali eBulgaria, Ubumi bobabini ngotyalo-mali eBulgaria, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala eBulgaria. Ubumi ngokusisigxina ngotyalo-mali eBulgaria, Ubumi bethutyana ngotyalo-mali eBulgaria, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eBulgaria, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eBulgaria, Ukuhlala ngokutyala eBulgaria, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eBulgaria, Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eBulgaria, okwesibini Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eBulgaria, ukuhlala kubini ngotyalo-mali eBulgaria, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eBulgaria, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eBulgaria, iinkqubo zokuhlala kwezoqoqosho eBulgaria, ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo mali eBulgaria, ukuhlala kwakhona ngezikimu zotyalo-mali eBulgaria, okwesibini ipaspoti i n IBulgaria, iipasipoti zesibini eBulgaria, inkqubo yesibini yokundwendwela eBulgaria, ipasipoti yesibini yesibini eBulgaria, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eBulgaria, ipasipoti yesibini yezopolitiko eBulgaria, ipasipoti yesibini ngokutyala eBulgaria, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eBulgaria, inkqubo yesibini yepaspoti eBulgaria, iskim sepasipoti yesibini eBulgaria, i-visa yegolide eBulgaria, ii-visa zegolide eBulgaria, iinkqubo ze-visa zegolide eBulgaria, inkqubo yegosa yegolide eBulgaria, yesibini i-visa yegolide eBulgaria, inkqubo yesibini yegosa yegolide eBulgaria, i-visa yegolide emibini eBulgaria, Ubumi kunye nevisa yegolide eBulgaria, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eBulgaria, ubumi begolide begolide eBulgaria, isikimu sevisa segolide eBulgaria, izikimu zevisa zegolide eBulgaria.
"Izisombululo ezi-1 zokumisa" kubo bonke ubumi bakho ngotyalo-mali eBulgaria ngenkxaso eyongezelelweyo.
Ubuncinci botyalomali eBulgaria kubumi bobuTyalo-mali: EUR 1,024,000
Intshayelelo IBulgaria kunye noBumi ngoTyalo mali
IBulgaria luhlanga olonwabisayo. Iintaba ziyamangalisa, kwaye iindawo zokutyibilika ekhephini azimangalisi kangako ukuba nomona kolunye uhlanga olukhoyo emhlabeni. Kukho itoni yezinto ezenza incindi apha. Ungabona izikhongozelo ezikhoyo ukuba zithengwe emacaleni ezitalato nakwezinye iidolophu. Ukutya okulinywe emhlabeni kuyafumaneka ukuba kuthengwe kuyo yonke indawo kwaye yeyona nto imnandi. Ehlotyeni kuyabila kwaye kubanda ebusika. Ubusika bunokuba ngaphantsi kwe-15. Ihlobo linokunxibelelana ne-35 okanye i-40 kwimimandla ethile njengePlovdiv kunye neBulgaria esemazantsi. Enye into ebeka iBulgaria kwimephu lulwandle olunentlabathi olumnandi, kunye neqondo lobushushu lamanzi oLwandle oluMnyama ngasekupheleni kwexesha lesentwasahlobo, iilwandle zinokutshintsha ukusuka kwimivambo yolwandle ekhuthazayo nenomdla kwezemidlalo.
IBulgaria inokubonelela ngokudibana okwahlukileyo kuxhomekeke ekubeni uhlala kwenye yeedolophu, okanye kwiidolophu kunye needolophu eziphantsi. Ngeli xesha xa abantu beveza iidolophu zaseBulgaria, babonisa uhlobo lweedolophu. Ngokuhambelana nale migca, qinisekisa ukuba uyakuhlala kolo hlobo lwemozulu kwimeko yokuba ucinga ngobukho basemaphandleni eBulgaria, nangayiphi na indlela awuyi kuba kude kubo bonke abanye abantu kukho uninzi lwangaphambili lwepats ezikhetha ezo ndawo kwaye zixabise icala elilungileyo lobomi obuthe tye ngakumbi, kukho izithili ezikufutshane neVeliko Tarnovo, Dobrich, kunye ne-Elhovo ukwenza nje isalathiso kwisibini, esinabantu abambalwa abahamba phambili. Inani labantu baseBulgaria liyehla ngokukhawuleza.
Abaqhubi ababini abasisiseko sale fiasco kukufuduka (abantu abaninzi bayishiyile iBulgaria ukusukela ekunyukeni ukuya kwi-European Union), bekhangela iimeko ezingcono zokusebenza, bexhaphaza nethuba lophuhliso. IBulgaria ine-Net defence yomntu omnye njengewotshi. Ewe kunjalo, kuvavanyo oluvela e-Eurostat lucinge ukuba abantu baseBulgaria banokuphulukana nesinye isigidi sabantu ngo-2050 kwaye babe ngaphantsi kwe-6.000 000.
Unxweme lolwandle lwaseBulgaria uLwandle oluMnyama lunokuhlala kwiihotele, ezihlala zipakishwe ngexesha eliphakamileyo (ngoJulayi -a-agasti), nangona kunjalo, phakathi kweendawo zokubalekela, unokufumana amanxweme aselwandle agutyungelweyo aya kukumisa, uthathe ixesha elininzi njengoko kufuneka ukuthatha uhambo olukhawulezileyo kwaye ubone uhlanga, uya kulithanda! Ukuhamba ngaphakathi kwesizwe ngokubanzi kulula kuba yonke into isondelelene, hamba uSofia-Varna (enye yezona zinto zahlulahlulwe ngakumbi kukuhamba ziikhilomitha ezingama-450.) Kwaye kukwakho neenqwelomoya ezimbalwa ezibonisa ezi dolophu zimbini ziphantsi Imizuzu engama-60.
Ngayiphi na imeko, ngethuba lokuba ungathanda ukuthanda umbono omangalisayo kwaye ube nethuba elaneleyo, ungathatha ulawulo olulinganisiweyo loololiwe, ungadlula ukusuka ezintabeni uye kunxweme loLwandle oluMnyama kwiiyure ezininzi naphakathi, uya kufumana iintlambo eziyolisayo. Ukutya nokusela kuthobekile kwaye kuyanceda kwimeko apho ungaphumi kolo hlobo lubalaseleyo. Uninzi lweekhefi zitya izinto ezikhethekileyo ngokubanzi phakathi kweye-12 ukuya kwezi-2 emva kwemini kwaye unokufumana ezizodwa malunga ne-5-6 leva. I-Espressos zibiza kakhulu apha kunakwintsalela yaseYurophu. Ungaya kwivenkile yekhofi esembindini ukuya ekuqaleni kosuku lwe-espresso kwaye ixabisa i-leva engu-2.00. 1 Euro. Nawe unokufumana isiselo esiyi-2 leva malunga ne-Euro.
AmaBulgaria lilizwe elivuya kakhulu. Olu hlanga lwasekwa ngo-681 AD ngaphezulu, lunyamezele izinto ongenakucinga ngazo, ikwangabavelisi boonobumba baseBulgaria ukuze ngeli xesha likhule liye kuninzi lwamazwe aseSlavic, banosuku lokudumisa. Oonobumba baseBulgaria ngolandelelwano nenkcubeko, kungomhla wamashumi amabini anesine kwinyanga kaCanzibe. Uninzi lolutsha luyalela abantu baseBulgaria ubukhulu becala ukuba banxibelelane ngesiNgesi kwaye baluncedo kakhulu kwaye kuyonwabisa ukusondela. Uninzi lwabantu baseBulgaria abafundisiweyo basebenza kwi-IT kunye nasasazeni sokuhambisa indawo enkulu kakhulu apha. AmaBulgaria nawo ayaziwa ngobuchule be-IT.
Bazoba imbuyekezo egqwesileyo abanokuhlala kuyo ngokumangalisayo kakuhle, ngakumbi kwimeko yokuba baphumele kude kumbutho ovela phesheya. IBulgaria inesantya esikhawulezayo sewebhu kwiplanethi, ufumana inkuthazo engaqhelekanga yemali. Ukuthozama kakhulu, kuxhomekeke kuyo, kwaye ikude kakhulu kwaye ibanzi. Elinye lezinto ezisemva kwempumelelo yokuhambisa kwakhona. Iifowuni zeefowuni zithobekile kwi-25 leva ufumana iifowuni ezingenamkhawulo kuyo yonke imibutho ene-intanethi ye-GB. IBulgaria yindawo engaqhelekanga onokuhlala kuyo ukuba awubuthathaka kwaye ikakhulu xa unentlawulo evela ngaphandle kweBulgaria, umzekelo, i-annuity, okanye usebenzela umbutho wangaphandle, ngokuqinisekileyo yindawo entle Qalisa usapho kunye nendawo ekhethwayo yokuhlala ngaphezulu kwama-66% ehlabathi.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuba ngummi nguTyalo mali lweBulgaria
Ubuncinci botyalomali Ubummi ngotyalomali eBulgaria
Ubumi ngokutyala imali eBulgaria
Ukucwangcisa ixesha lokuba ngummi ngotyalo-mali lweBulgaria
Iinketho zotyalo mali ze Ubumi ngokutyala iBulgaria
Kutheni usiya kubumi ngokutyala iBulgaria
IBulgaria lilungu le-European Union kwaye iya kuba lilungu lendawo yaseSchengen kungekudala. Yiyo loo nto ilizwe libonelela ngenkqubo yokubonisa i-visa. Ubummi baseBulgaria bungakunika ilungelo lokujikeleza iYurophu ngaphandle kwevisa. Emva kweminyaka emi-2 yexesha lokuqhubekeka uya kuba nakho ukonwabela izibonelelo zokuba ngumhlali osisigxina eBulgaria. Izibonelelo zibandakanya iirhafu eziphantsi, ukufikelela kwimarike ye-European Union kunye nezinye ezininzi. Ukufumana ubumi baseBulgaria awunyanzelekanga ukuba ulwazi ulwimi okanye uphathe izindlu nomhlaba. Emva kokufumana ubumi baseBulgaria unokuhamba ngokulula kwaye uhlale nakweliphi na ilizwe le-EU.
Izibonelelo zokufumana ubumi baseBulgaria ezizisiweyo ziyasetyenziswa nakumalungu osapho lwakho kubandakanya iqabane lakho nabantwana.
Ubumi Ngenkqubo yotyalo mali eBulgaria
Uqala ube yindawo yokuhlala esisigxina ukuya kuthi ga kwiinyanga ezilithoba. Ngeli xesha kuya kufuneka undwendwele iBulgaria amatyeli amabini kunye noMmeli waseBulgaria kwilizwe lakho. Emva kokulungiswa kwefayile yakho, uya kucelwa ukuba uthumele inani lotyalo-mali lwe-BGN 1 yezigidi (i-EUR 512,000). Xa kukhutshwa isatifikethi sotyalo-mali lwakho unokufaka isicelo ngohlobo lwe-D lweVisa. Xa ufumana i-visa yakho, undwendwela iBulgaria kwaye ungenise isicelo. Ngexesha elizayo xa undwendwela ukufumana ikhadi lakho lokuhlala ngokusisigxina.
Emva kokuba ungumhlali ngokusisigxina unyaka, unokufaka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali olongezelelekileyo lwe-BGN 1 yezigidi (i-EUR 512,000)., Utyalo-mali lunokuba yidiphozithi kwiibhondi zikarhulumente, okanye ungatyala imali kwishishini elamkelweyo ngurhulumente. Ubummi bunokubakho kwiminyaka emibini.
Uyacelwa ukuba ubeke i-BGN 1 yezigidi (i-appr. I-EUR 512,000) kwiPotifoliyo yeBhondi kaRhulumente isithuba seminyaka emi-5. Emva kweminyaka emi-5, isixa esipheleleyo siya kubuyiselwa, kodwa ngaphandle komdla. Imali efunekayo inokuxhaswa nangona ibhanki yaseYurophu.
Ukufumana utyalo-mali olukhawulezileyo lokuba ngummi we-BGN 1 yezigidi (i-appr. I-EUR 512,000) iyafuneka. Utyalomali kufuneka lugcinwe iminyaka emi-2. Utyalomali lunokufakwa kwiPotifoliyo yeBond kaRhulumente okanye kwishishini ekufuneka livunyelwe ngurhulumente waseBulgaria.
Isicelo sobumi sinomrhumo we-EUR 7,500. Amalungu osapho aphantsi kwemali eyongezelelweyo. Umrhumo wokuqhubekeka kunye nenkqubo yobumi yi-EUR 25,000. Ukongeza, i-EUR 2,500 kufuneka ihlawulwe ngomntwana ongekabikho i-18 okwangoku.
Inkxaso yabaxhasi kubuZaleli ngotyalo-mali lweBulgaria
Iqela lethu Ubumi ngaBameli boTyalo mali baseBulgaria kwaye Ubumi ngoTyalo-mali Amagqwetha eBulgaria ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eBulgaria ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eBulgaria, indawo yokuhlala ngokutyala imali evela eBulgaria kunye namanye amathuba okungena kwelinye ilizwe, kumazwe angama-37.
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ubummi ngeenkonzo zotyalo mali iBulgaria, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena yaseBulgaria, abatyali abangena kweli baseBulgaria abanamaxabiso afikelelekayo, Ubumi obufikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali eBulgaria, ubumi obufikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eBulgaria kunye nefemu yokubonelela ngokufudukela eBulgaria.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eBulgaria.
Ubummi ngoTyalo mali lweBulgaria ngokusebenzisa iiarhente ezithengiswayo
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu eBulgaria ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eBulgaria, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo kubumi babo ngotyalo-mali lweBulgaria. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eBulgaria abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eBulgaria, befumana eyona mbuyekezo.
Kufuneka uyazi - Ubumi baseBulgaria ngoTyalo mali
Ubummi ngeGqwetha lotyalo-mali laseBulgaria liza kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu oluncedo kubumi bakho obuphumeleleyo ngotyalo-mali eBulgaria. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zobuhlali ngoTyalo mali eBulgaria zibandakanya:
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokuLungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngabemi ngokutyala iBulgaria kubaxhasi ukuze bafumane ubumi baseBulgaria kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ukuze sihambele phambili kubumi bakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali seBulgaria siya kufuna iikopi ezivavanyiweyo zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Ukuguqulelwa kunye ne-apostille yamaxwebhu Ubumi ngesicelo sotyalo mali seBulgaria. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBumi ngokutyala imali eBulgaria kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu obumi kunye nawosapho lwakho abe sisicelo sotyalo mali seBulgaria sele silungile, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni baseBulgaria.
Nje ukuba isicelo sakho sobummi ngotyalo-mali lwaseBulgaria samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asibuxhasi okanye sibunike ubummi ngeenkonzo zotyalo mali eBulgaria kubantu abakhankanywe ngezantsi okanye amashishini eBulgaria:
Ubumi ngeenkonzo zotyalo mali zeBulgaria azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ukusuka okanye eBulgaria.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo mali zeBulgaria azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eBulgaria okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eBulgaria.
Ubumi ngokubonisana notyalo mali kwiBulgaria awanikezelwa ngayo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eBulgaria.
Ubumi ngenkxaso yotyalo mali eBulgaria ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuzo eBulgaria.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo mali zeBulgaria ayisiyo yamashishini ajongene nezixhobo eziyingozi okanye ezinobungozi zebhayoloji okanye zenyukliya eBulgaria.
Ubumi ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeBulgaria ayifumaneki kubantu baseBulgaria ejongene norhwebo, ukugcinwa eBulgaria, okanye ukuhanjiswa kwamalungu oLuntu.
Ubumi ngotyalo-mali eBulgaria ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Ubumi iinkonzo zenkqubo eBulgaria ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eBulgaria.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Bhulgariya ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eBulgaria.
Ubumi bethu Amagqwetha eBulgaria abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eBulgaria.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxhasi beBulgaria kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eBulgaria ukuvunywa kwesicelo Ubumi ngotyalo-mali eBulgaria.
Ubumi ngokutyala imali eBulgaria nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Ixhaswe bubumi bamazwe aphesheya ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseBulgaria, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Ubummi bethu ngeenkonzo zotyalo-mali kwiBulgaria zibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga elifanelekileyo lempumelelo eBulgaria.
Sithathe iminyaka yamava kubumi bobabini ukuya eBulgaria exhasa abathengi kunye neentsapho zabo kwiBulgaria.
Ubumi obunamava ngabaceli botyalo-mali kwiBulgaria kunye neearhente zomthetho zaseBulgaria ezibonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Phambi kobummi bakho beBulgaria nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu kwiBulgaria
Sinamava aphesheya kubuMmi ngotyalo-mali kubandakanya iBulgaria, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho, ubumi bakho ngotyalo-mali kwiBulgaria buyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zobummi ngotyalo mali ukuya eBulgaria
Ukubala iindleko zobumi ngokutyala iBulgaria nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beBulgaria, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zoBumi njengenkqubo yotyalo mali yeBulgaria kunye nezinye iindleko.
Ubummi ngoTyalo mali eBulgaria kunye nezinye iinkonzo
Ngaphandle kobummi ngokubonisana notyalo mali kwiBulgaria, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiBulgaria, ongenakufumana phantsi kwesinye isambulela esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi baseBulgaria abasenza ivenkile yokumisa ibulgaria kunye namazwe ayi-106.
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kobumi ngokutyala imali eBulgaria ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eBulgaria nakwamanye amazwe.
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali ukuze IBulgaria ukuba ucwangcisa qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eBulgaria ukuqala kwangoko eBulgaria.
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali eBulgaria, ukuseta ishishini kwi Bhulgariya.
Amagqwetha oBumi ngoTyalo mali eBulgaria
Sibonelela ngobumi bobuMthetho ngezisombululo zotyalo-mali kwiBulgaria kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, kuba iBulgaria, sizinkokeli, ifemu yethu yezomthetho eBulgaria ineearhente zokufudukela eBulgaria, sinedumela lokuhambisa awona mava okusebenza kwabathengi eBulgaria kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseBulgaria kunye neentsapho zabo. Ubumi bethu liqela lotyalo mali eBulgaria libonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yoMthengi.
Amandla egqwetha laseBulgaria liyafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoBumi bobuGqwetha ngotyalo-mali eBulgaria. Ukuba uhlala eBulgaria okanye uceba ukutyelela iBulgaria, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Imibuzo ebuzwa rhoqo- Ubumi ngoTyalo mali eBulgaria
Luthini ubuncinci lotyalo-mali kubumi ngotyalo-mali eBulgaria?
Ubuncinci botyalo-mali kubumi ngotyalo-mali eBulgaria yi-EUR 1,024,000.
Ngaba ubonelela ngenkxaso yezomthetho kwiBulgaria kubumi ngotyalo-mali?
Ewe, igqwetha lethu eBulgaria kunye neearhente eBulgaria zibonelela ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali eBulgaria.
Ngaba ubummi ngotyalomali ukuya eBulgaria bunendleko?
Iindleko zoBummi ngotyalo-mali eBulgaria kunye nobummi ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali lweBulgaria yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wobonelelo kubuZaleli ngotyalo-mali ukuya eBulgaria, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yobumi bobuRhulumente ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sobumi ngokutyala imali eBulgaria okanye kwi-visa yotyalomali eBulgaria?
Ubummi beenkonzo zotyalo-mali ezinokuthi zisetyenziswe ngabemi beliphi na ilizwe kodwa imizekelo embalwa bubuBemi ngotyalo-mali eBulgaria ukusuka e-Asiya, Ubummi ngotyalo-mali eBulgaria ukusuka e-Afrika, Ubummi ngotyalo-mali ukuya eBulgaria ukusuka eYurophu, Ubumi ngotyalo-mali ukuya eBulgaria ukusuka eMzantsi Melika, Ubummi ngotyalo-mali eBulgaria ukusuka eMalaysia, ubumi ngotyalo-mali eBulgaria ukusuka eBangladesh, ubumi ngotyalo-mali eBulgaria ukusuka eIndonesia, ubumi ngotyalo-mali eBulgaria ukusuka eSri Lanka, ubumi ngotyalo-mali eBulgaria ukusuka eNepal, ubumi ngotyalo-mali ukuya eBulgaria ukusuka eIndiya kunye nobumi ngotyalo-mali kwiBulgaria ukusuka kwi-UAE.
Ubumi bobuGcisa ngesiKhokelo kuTyalo mali eBulgaria
Cela ukubonisana simahla kubumi bakho ngoTyalo-mali kwiBulgaria
Amagama abalulekileyo kubumi ngoTyalo mali lweBulgaria